Naya Post Nepal | पल शाहको बारेमा साथी शिशिर भण्डारी बोले । मैले चिनेको पल शाह यस्ता थिए, यो के भयो ? भन्दै मुख खो’ले (भिडियो हेर्नुस)
पल शाहको बारेमा साथी शिशिर भण्डारी बोले । मैले चिनेको पल शाह यस्ता थिए, यो के भयो ? भन्दै मुख खो’ले (भिडियो हेर्नुस)
पछिल्लो समय चर्चित अभिनेता पल शाह र एक नाबालिक बिचको प्रेम, बि’वाद र अदालतसम्म पुगेको केशले सबैको ध्यान त्यसतर्फ नै खिचेको छ । सामाजिक सन्जाल पि’डित भनिएकी गायिका र पिड क भनिएका गायकका भि’डियो र पो’ष्टहरुले रँगिएका छन् ।
सँ’घर्ष गरेर अहिलेको स्थान बनाएका पल र कलाको का’रण भाई रल भएर साँगीतिक बजारमा नाम र दाम कमाईरहेकी नायक र गायिका बिचको भित्री सम्बन्ध लुक्न सकेन, बा’हिर आउँदा यसरी आयो कतिलाई चा’सो र कतिलाई हाँ’सोको बिषय बन्यो ।
सम्मानित अदालत समक्ष पुगिसकेको केशलाई निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीलाई का’रवा’ही अदालतले नै गर्दछ तर सन्जालमा धेरै अड्डा र अदालतहरु खु’लिसकेका छन् । यसैबिच कलाकार तथा सँ’चारकर्मी शिशिर भण्डारीले पल शाहका बिषयमा आफ्नो धा’रणा राखेका छन् ।
पल शाहको पहिलो चलचित्र नाई नभन्नु ल ४ मा साथीको भुमिका नि’र्वाह गरी करिब एक महिनाको मि’त्रता गरेका शिशिरले पल अन्त र मनबाट नराम्रो नभएको बताए । गरिब, दुखी र सँ’घर्षशि’ल व्यक्ति र कलाकारलाई सधैं सपोर्ट गर्ने पलको उनले खु’लेर ता’रिफ गरे ।
यद्यपी ग’ल्ती स’बैबाट हुन्छ, ना’बालिक गायिकासँगको स’म्बन्ध’मा पलबाट गल्ती र कमजोरी भएको भए त्यसलाई अदा’लतले हेर्ला, शिशिरले ब’ताए । भिडियो
यो पनि ,,काठमाडौं: भिजिट भिसामा विदेशमा जान कम्तिमा पनि वर्षको दश लाख आ’म्दानी हुनुपर्ने प्रावधान अ’गाडि सा’रिएको छ। भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा स’माधानका उपाय हरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले कम्तिमा पनि दश लाख आ’म्दानी हुनुपर्ने प्रा’वधान प्र’तिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यसले न्युन आय भएका नेपालीहरु भिजिट भिसामा विदेश जानबाट व’ञ्चित हुने देखिन्छ। ‘वार्षिक न्युनतम १० लाख रुपैँया कर आय भ इ कम्तिमा सोको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपाल को कर प्रणालीमा आ’बद्धता भएका व्यक्तिहरु,’ प्रति’वेदनमा भनि एको छ।
त्यस्तै कागजात सामान्यरुपमा शं’कास्पद देखिएको तर फ’र्जी हो भन्ने यकिन गर्न नसक्ने भएका यात्रुलाई प्र’स्थान अनु’मति दिई छा नबिनका लागि कागजान वि’भागमा प’ठाउनुपर्ने प्र’तिवेद’नमा उ’ ल्लेख छ।
गरी सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिने भएमा टुर प्याकेज, शैक्षिक भ्र’मण कार्यक्रम अथवा यस्तै प्रकृतिको अन्य का’र्यक्रमको स’न्दर्ध मा वि’भागको नि’र्णयअनुसार हुने प्र’तिवेदनमा भनिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट
२०७८ फाल्गुन १९, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 888 Views